Ebe Iji Chọta Europe Kasị Ebube Architecture | Save A Train
Home > Travel Europe > Ebe Iji Chọta Europe Kasị Ebube Architecture
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 05/12/2020)
Na-achọ ịhụ ụfọdụ ikenyeneke mbiet ije na gị ọzọ ezumike? Ọ bụrụ otú ahụ, e eleghị anya ọ dịghị ebe ka mma karịa Europe maka ị. Ma ị na-nwere mmasi na oge gboo ije ekwekọghị ma ọ bụ na-enwe olileanya na chọta ụfọdụ na-amachaghị ama jewels, European obodo gị kpuchie. Ka anyị nwere a lee anya na ihe atụ ụfọdụ nke ebube ije na ebe ịhụ ya niile:
ebube Architecture: Italy
Italy jupụtara obodo obere obodo ebe i nwere ike-efu edebe mara mma ụlọ. Ma ị na-na Rome ma ọ bụ Florence, fọrọ nke nta n'akụkụ ọ bụla bụ uru a picture. Maka njem nleta na-achọ ọmarịcha obere obodo, Vicenza bụ nri ebe. Ọ bụ nso ma ọ bụrụ na ị na-na na na-ewere a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ site Venice, bụ nke na-uru a nleta. Mgbe Vincenza na-ama n'ihi na ya Renaissance ije style ime uche nke Andrea Palladio, Venetian ije bụ mgbe Gothic, kọwara n'uju, na mma.